पावर बैंक किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् | Rochak Khabar
पावर बैंक किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् admin
स्मार्टफोनको ब्याट्रीको ठूलो समस्या भनेको फूल चार्ज भएतापनि दिनभर बल्लतल्ल टिक्नु। त्यसका लागि अहिले एकमात्र सहज समाधान भनेको पावर बैंक किन्नु हो। पावर बैंकले मोबाइल र ट्याब्लेटलाई तीन चार पटकसम्म चार्ज गर्छ। बजारमा अहिले धेरै प्रकार पावर बैंक उपलब्ध छन् । कत्तिले त स्मार्टफोनलाई नै असर पुर्याउँछन्। पावर बैंक किन्दा ध्यान निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ।
साइजसबैभन्दा पहिला तपाईँले साइज कत्रो किन्ने हो, छनौट गर्नुपर्छ। घरमा मात्र प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँले ठूलो साइजको लिन सक्नुहुनेछ। खल्ती तथा झोलामा हालेर यात्रामा निस्कनु छ भने सानो र हल्का साइजको किन्नुपर्छ।पावरबजारमा १० हजार एमएएच देखि २० हजार एमएएच क्षमताका पावर बैंक उपलब्ध छ। आफ्नो स्मार्ट फोन कति एमएएचको हो त्यही अनुसार पावर बैंक किन्नुपर्छ। २ हजार एमएएच ब्याट्री पावरको मोबाइलका लागि ४ हजार एमएएच पावर भएको पावर बैंक किन्नुपर्छ भने, ३ हजार एमएएच पावरको ब्याट्री भएको मोबाइल छ भने १० हजार एमएएचभन्दा माथिको पावर बैंक किन्नु पर्छ। १० हजार एमएएच पावर भन्दा माथिको पावर बैंकले २ वा सो भन्दा बढीसम्म मोबाइल चार्ज गर्न मिल्छ।ब्राण्डपावर बैंक किन्दा कुन ब्राण्डको हो ध्यान दिन आवश्यक छ। राम्रो कम्पनीको, राम्रो क्वालिटी भएको पावर बैंकहरु बजारमा खोज्नुपर्छ।सेप्टी प्रोटेक्सनपावर बैंक किन्दा त्यहाँ दिएको सावधानीहरु अपनाउनुपर्छ। त्यसमा टेम्पेचर प्रोटेक्सन, इनपुट ओभर भोल्टेज प्रोटेक्सन लगायतका कुराहरु लेखिएको हुन्छ। बजारमा १ हजारदेखि २० हजारसम्मका पावर बैंक पाइन्छ। power Bank